Thanks to Madaxweyne Yılmaz shaqaalaha SAMULAŞ | RayHaber | raillynews
[08 / 04 / 2020] Devletten Kiracılara 1150 TL Kira Yardımı!	06 Ankara
[08 / 04 / 2020] Ücretsiz İzne Çıkarılanlara Maaş Desteği Geliyor	06 Ankara
HometareenkaMahadsanid Duqa Magaalada Yılmaz
03 / 02 / 2017 tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, HAY'ADAHA, Samulaş, TURKEY, taraamka
Duqa magaalada Samsun, SAMULAŞ Mahadnaqa Shaqaalaha: Maayarka Samsun Yuusuf Ziya Yilmaz, "Ha isku kicin naftaada intaad qabaneyso shaqo in shaqadaasi aysan imaan," ayuu yidhi.
Duqa degmada Samsun Yuusuf Ziya Yilmaz, Samsun intii lagu gudajiray barafka culus ee xiliyada habeenkii ah si loogu shaqeeyo nidaamka tareenka, ayaa u mahadceliyay shaqaalaha shirkadda SAMULAS.
WAA KU SAABSAN MADAXWEYNAHA YILMAZ OO KU SAMEEYSA SAMULAŞ STAFF
Samsun bilowgii todobaadkan waxay muujineysaa saameynta barafka culus ee magaalada si looga takhaluso saameynta xun ee ay ku yeelaneyso maalinta shaqada iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa uu ku daray agaasimaha farsamada ee maareeyaha guud ee SAMULAS inuu booqday Yilmaz. Duqa magaalada Yılmaz wuxuu u mahadnaqay shaqaalaha sida adag uga shaqeeyey xaqiijinta howlaha joogtada ah ee firfircoon ee nidaamka tareenka, kaas oo leh awooda ugu badan ee rakaabka, imisi Nidaamkayaga tareenka wuxuu qaataa in kabadan kun rakaab maalin walba. Waxaan jecelahay inaan kaaga mahadceliyo inaad sameysay dadaallo badan oo nidaamka ka dhigaya mid shaqeynaya habeenkii. 50 kama helin roob iyo qabow noocaas ah Samsun in kabadan hal sano. Magaaladaya si xun bay u saamaysay roobka dartiis. Annaga oo ah Dawlada Hoose ee Magaalo-Weyn, waxaan ku dadaalnay sidii aan u yareyn lahayn dhibaatooyinka oo dhan. Waxaan sidoo kale ka hortagnay suurtagalnimada qoob-jabka ka dib barafka.
Haddii aadan naftaada xanaaqin inta aad shaqeyso, shaqo kama imaanayso
Yılmaz wuxuu yiri, an thatz Haddii aadan xanaaqin naftaada inta aad shaqada kujireyso, rumeyso haddii aadan ku daalin. Markaad ka xumaato shaqo, waxaad u badan tahay inaad xal u hesho adigoo raadinaya waxyaabo kale. Daal, nasiib darro uma muuqato shaqo wanaagsan nasiib daro. Waxaad ubaahantahay inaad naftaada muujiso. Waan ogahay inaad sida ugu fiican u dadaalaysid inaad hubiso in shaqadaada lagu xuso hab wanaagsan. Masuuliyad weyn ayaan leenahay. Waxaan haynaa howl gallo waa weyn. Nasiib darrose, waxaa nalooga qaatay waxyaabo gaar ah si aan u fulinno shaqooyinkaas, aadna waan u careysanahay. Laakiin yaannaan ka walwalin horumarka magaaladan. Rajada ah inaan mustaqbalkeyga qurxoon uga tagno dhalinyaradeena ayaa noo sii nooleysa ”
Xakameynta Cadaadiska Cadaadiska ee SAMULAŞ Shaqaale
Booliska ayaa weeraray ey, rakaab shil ku dhacay wadada tareenka
Diyaargarowga gaadiidka dadweynaha ee Sakarya